ကလိုစေးထူး: October 2006
ပေါ်တာ အထမ်းသမား အတွေ့အကြုံကို တင်ပြစဉ်က ခြောက်ရက်တာသော လမ်းခရီးက ထိတ်လန့်ဖွယ်၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်၊ ခါးသီးဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တချို့ ဖော်ပြဖို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ် ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာရယ်ကြောင့်နဲ့ တိမ်မြုပ်နေတဲ့ အမှန်တရားတွေ၊ အညှင်းပန်း ခံရမှုတွေကို ကျနော် လက်လှမ်း မီသလောက် ခင်မင်ရတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းများကို လက်ဆင့်ကမ်း ပြောပြချင်တဲ့ အတွက် ထပ်မံရေးသားလိုက်ပါတယ်..
ဒီအဖြစ်တွေကို မပြောပြမီမှာ စစ်ဆင်ရေး တခုကို ထွက်ကြမယ့် စစ်တပ်တွေရဲ့ ကျနော်တုိ့ အရပ်သားတွေ တနည်းအားဖြင့် ပေါ်တာတွေကို စောင့်ကြပ်ကြတဲ့ စနစ်တခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်.. ခရီးစတင် ထွက်ကြရတဲ့အခါ အရှေ့ဆုံးကနေ သွားကြတဲ့ ပွိုင့်တပ်စိတ်မှာ ပေါ်တာတွေကို မလိုက်စေရပါဘူး.. အဲဒီ ပွိုင့်တပ်စိတ်က စစ်သားများကိုလည်း သူတို့ရဲ့ ကျောပိုးအိတ်၊ ရိက္ခာ အစရှိတာတွေကို မထမ်းစေပါဘူး.. အဲဒီလိုပဲ ခရီးသွား လူတန်းကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးမှာကိုလဲ ပေါ်တာတွေကို မထည့်စေပါဘူး.. စစ်သားတွေ ချည်းသာ လိုက်စေပါတယ်.. ဆိုလိုတာ ကတော့ ရှေ့ဆုံး လူ အယောက် ၂၀ ယောက်နဲ့ နောက်ဆုံးက လူအယောက် ၂၀လောက်ဟာ စစ်သားတွေချည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ပေါ်တာတွေကို အလယ်မှာ ထားပီး (အဲဒီတုန်းက) ပေါ်တာ ငါးယောက်ကို စစ်သားတယောက်က စောင့်ကြပ်ကြပါတယ်..
မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ ဗီဒီယိုတွေထဲက စစ်ကားတွေထဲမှာတော့ စစ်ဆင်ရေးသွားကြတဲ့အခါ လူတန်းကြီးထဲမှာ ပေါ်တာတွေ တယောက်တလေမှ ပါတာ မတွေ့ဖူးသလို ချီတက်ကြတာလဲ စနစ်တကျရှိလှပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တကယ့် အပြင် လက်တွေ့ ကျနော်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ ခရီးစထွက်တဲ့အခိုက်မှာသာ လူတွေက စနစ်ကျသလိုလို ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်း ခရီးသွားတာ ကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့ တခါတလေ ရှေ့ကလူတွေနဲ့ နောက်ကလူတွေ အဆက်ပြတ်လိုပြတ်နဲ့ လူပေါင်းရာချီတဲ့ လူတန်းကြီးဟာ ဟိုတစု ဒီတစုနဲ့ ဖြစ်ကြလွန်းလို့ အရှေ့ကလူတွေက အနောက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကို မကြာခဏ စောင့်ခေါ်ရလေ့ရှိပါတယ်..
အစပထမတော့ ကျနော်ဟာ ပေါ်တာဆိုတာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံတာကလဲဖြစ်၊ သွားရမယ့်ခရီးက ပန်းခင်းတဲ့လမ်းလဲ မဟုတ်ဆိုတော့ ကျနော့်လောက် ကံဆိုးတဲ့လူ ဒီကမ္ဘာမှာ မရှိတော့ဘူးလို့တောင် ထင်မှတ်ခဲ့မိပါတယ်… တကယ်တမ်း ခရီးသွားကြတဲ့အခါမှာတော့ ကျနော့်ထက် မြောက်မြားစွာ ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျနေတဲ့ လူပေါင်း များစွာကို သတိထားမိလာရပါတယ်.. အဲဒီလူတွေကတော့ စစ်ဆင်ရေး လုပ်ကြမယ့် စစ်တပ်တွေက သူတို့လာရာ လမ်းခရီးမှာ တွေ့တဲ့ ယောက်ျားတွေကို အခွင့်အရေးရရင် ရသလို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံကြရတဲ့လူတွေပါ.. သူတို့တတွေ ဘာလို့ ကျနော့်ထက်ကံဆိုးကြရပါသလဲ?? ဒီလိုကြောင့်ပါ… ကျနော်တို့တတွေကတော့ လေးရက်တာ လုပ်အားပေးကြပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်ဆိုပြီး အနုနည်းနဲ့ အဖမ်းခံရတဲ့ လူတွေဖြစ်လို့ပါ.. ပေါ်တာခြင်းအတူတူ ကျနော်တို့က လေးရက်ပြည့်ရင် ဒါမှမဟုတ်လဲ ငါးရက် ခြောက်ရက်ပြီးရင် ပြန်လွတ်ကြမယ့်လူတွေပါ.. ဟိုလူတွေကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး.. သူတို့က အဖမ်းဆီးခံကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို ဘယ်တော့ ပြန်လွှတ် ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက် ပေးထားတာ မရှိပါဘူး.. အဲဒါကြောင့် စစ်ဆင်ရေးတာဝန် ခြောက်လ တာဝန်ပြည့်လို့ စစ်သားတွေက နောက်တန်း ပြန်တော့မယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်ရှေ့တန်း တက်မယ့် တပ်အတွက် အဲဒီလူတွေကို လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် အဲဒီလူတွေဟာ နောက်ထပ် စစ်တပ်နဲ့အတူ ၀န်တင် လားတွေသဖွယ် အနိဌာရုံတွေ ရှိရာကို လိုက်ပါကြရ ပြန်ရှာပါတယ်..
အသွား ခရီးကတော့ ထူးခြားတာ သိပ်မများလှပါဘူး.. လူတန်းကြီးက တရုန်းရုန်း၊ ဆဲသံဆိုသံ တညံညံနဲ့ပဲ သွားဆိုရင် သွားလိုက်.. နားဆိုတော့ နားလိုက်နဲ့ပဲ သူတို့အလိုကျ အောင့်အီး ထမ်းပိုးရင်း သူတို့တွေ တပ်ချင်းလဲကြမယ့် ရွာကို လေးရက်အကြာမှာ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်.. ကျနော့် ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် စက်ဆုပ် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ အပြန်ခရီးမှာပါ..
အသွားခရီးမှာ ကျနော်တို့ကို ပေါ်တာအဖြစ် ခိုင်းစေတဲ့စစ်တပ်ဟာ နောက်တန်းကနေ ရှေ့တန်းကို စစ်ဆင်ရေး ထွက်တဲ့ တပ်ဖြစ်ပြီး အပြန်ခရီးမှာ ခိုင်းစေတဲ့ တပ်ကတော့ ရှေ့တန်းကနေ နောက်တန်းကို ပြန်ကြရမယ့် တပ်ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် ထမ်းပိုးပေးရတဲ့ ပစ္စည်းခြင်း အတန်ငယ် ကွဲပြားပါတယ်.. အသွားတုန်းက ထမ်းပိုးရတာတွေက လက်နက်တွေနဲ့ ရိက္ခာတွေသာ ဖြစ်ပေမယ့် အပြန်ခရီးမှာ ထမ်းရတဲ့အထဲမှာတော့ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ စစ်သားတွေပါ ပါလာခဲ့ပါတယ်.. ကျနော့်မျက်မြင်အရ ပြောရရင် အသွားတုန်းက ကျနော်တို့ကို စောင့်ကြပ်တဲ့ စစ်သားတွေထက် အပြန်ခရီးက စစ်သားတွေက ပိုမို ရိုင်းစိုင်း ရင့်သီးကြပါတယ်.. သူတို့နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ ပေါ်တာတွေကလဲ ကျနော်စောစောကပြောသလို ကာလရှည်ရှာ ဖမ်းဆီးခိုင်းစေခြင်းရတဲ့ လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မေးရိုးကငေါငေါ၊ မျက်တွင်းဟောက်ပက်တွေနဲ့ အင်မတန် ကရုဏာသက်ဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခိုင်းစေတဲ့ စစ်သားတွေကတော့ ဒါဟာ လူသားအချင်းချင်းပါလားဆိုတဲ့ စာနာစိတ်မထားပါဘူး.. ရက်ပေါင်းကြာရှည် အခိုင်းစေခံရလို့ ဆက်မသွားနိုင်ရင် လက်ထဲမှာ အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ သစ်ကိုင်းနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာ မထမချင်းရိုက်ပါတယ်.. ပါးစပ်ကလဲ အဆက်မပြတ်ဆဲဆိုပြီး ရိုက်တာပါ.. ဒီလိုနဲ့……………………..။
အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့ လူတစုဟာ ခရီးတန်းရဲ့ အရှေ့နဲ့ရော အနောက်နဲ့ပါ အဆက်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်.. လူတစု ဆိုပေမယ့်လဲ များများ စားစားတော့ မဟုတ်ပါ။ ကျနော်နဲ့ ဦးလေး အပါအ၀င် ပေါ်တာ ခြောက်ယောက် လောက်နဲ့ အစောင့် စစ်သား နှစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစစ်သား နှစ်ယောက်ထဲက နှစ်ရစ်နဲ့ တယောက်က အဲဒီလို ရှေ့နဲ့ရော နောက်နဲ့ပါ ပြတ်နေတာကို လိုလားပုံ မရပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ရှေ့ကို မြန်မြန် သွားနိုင်သမျှ သွားအောင် ကျနော်တို့တွေကို လောဆော် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ထဲက ပေါ်တာ တယောက်က ရှေ့ကို ဘယ်လိုမှ ဆက်မသွားနိုင် လောက်အောင် အမောဆို့နေပါတယ်။ အမောဆို့တယ်ဆိုတာထက် ရက်ပေါင်းများစွာ လေးပင်တဲ့ ၀န်ထုပ်ကို ထမ်းယူ လိုက်ပါနေရတဲ့ အတွက် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက လူ တယောက်ရဲ့ ရှိရှိသမျှ အားအင် ကုန်ခန်း သွားတာလို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါမယ်။ ရှေ့ကို ခြေလှမ်း အနည်းငယ် သွားလိုက်၊ လမ်းဘေးမှာ ပုံလဲလိုက်၊ ပါးစပ်ကလဲ “ ဆရာတို့ရယ်၊ ကျနော် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ လို့ပါ “ လို့ ငိုသံကြီးနဲ့ တတွတ်တွတ် တောင်းပန်လိုက် နဲ့ပါ။ ပထမတော့ အစောင့် စစ်သားက ဆဲဆိုပြီး အတင်းပြန်ထ ခိုင်းပါတယ်။ ဟိုလူက မထတော့ မထမချင်း ရိုက်ပါတယ်။ ရိုက်လိုက် ကုန်းရုန်းထပြီး ရှေ့ကို နည်းနည်းသွားလိုက်၊ နောက်တခါ ပုံလဲလိုက်၊ ထပ်ရိုက် ထပ်ထနဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အထမ်းသမားဟာ သူထမ်းထားတဲ့ အထုပ်ကို ဘုန်းကနဲ ပစ်ချပီး သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ တောထဲကို ၀င်ပြေးပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း အမေရေ၊ အမေရေလို့ ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်ပြီး ပြေးတာပါ။ အဲဒီမှာတင် အစောင့် စစ်သား နှစ်ရစ်နဲ့လူက (နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ) “ ဟာ.. ဒီ ငါ … သား “ လို့ ဆဲပြီး၊ လက်ထဲက သေနတ်နဲ့ လှမ်းပစ်ထည့်လိုက် ပါတော့တယ်။ ပစ်တယ်ဆိုတာက ခြောက်လှန့်ပြီး ပစ်တာ မဟုတ်ပါ။ လူကို သေသေ ချာချာကြီးကို လှမ်းပစ်ထည့်တာပါ။ လေးငါးချက်လောက် ပစ်အပြီးမှာတော့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ လူကို ထိသွားပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေကို အကုန် အဲဒီမှာ ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေကြလို့ လှမ်းပြောပြီး စစ်သား နှစ်ယောက်က ပြေးသွားတဲ့ လူနောက်ကို သွားကြည့်ပါတယ်။ ခနနေတော့ ပြန်လာကြပါတယ်။ ပစ်လိုက်တဲ့ နှစ်ရစ်နဲ့လူက စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ဟိုလူ ထမ်းရမယ့် အထုပ်ကို သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဆဲဆဲဆိုဆို ကောက်ထမ်းရင်း ကျနော်တို့ကိုလဲ “ ပြေးလို့ ခြောက်ပစ်လိုက်တာ သေသွားပြီ “ လို့ ပြောရင်း ရှေ့ကို ဆက်သွား ခိုင်းပါတယ်။ နာရီဝက် သာသာလောက် ရှေ့ကို ဆက်သွားတော့ ပြတ်သွားတဲ့ ရှေ့ကလူတွေ နားရက်သား ထိုင်စောင့် နေကြတာကို ပြန်မီသွားပါတယ်။ နှစ်ရစ်နဲ့လူက ပေါ်တာတယောက် လွတ်သွားတယ်လို့ သူ့ အရာရှိကို သတင်းပို့ပါတယ်။ ပစ်သတ်လိုက်တယ် လို့ မပြောပါဘူး။ ကျနော် အပါအ၀င် တခြားသော ဘယ်သူမှလဲ သူ ပစ်သတ်လိုက်တယ် ဆိုတာကို မပြောရဲ ကြပါဘူး။ အဲဒီ အချိန်မှာ ပုရွက်ဆိတ် တကောင်လောက်တောင် တန်ဖိုးမဲ့နေတဲ့ မိမိ အသက်ကို ရေငုံ နှုတ်ပိတ်နေခြင်းကသာလျှင် အကောင်းဆုံး စောင့်ရှောက်တာပဲလို့ အားလုံးက နားလည် နေကြလို့ပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ရယ်လို့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် မြွက်ကြားခဲ့တဲ့ လူ့ အသက်တချောင်းဟာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုရဲ့ ဓားစာခံ အဖြစ် ပေးဆပ် လိုက်ရပါတော့တယ်။ သူ အိမ် ပြန် အရောက်ကို မျှော်နေကြမယ့် သူရဲ့ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ ညီအကို မောင်နှမတွေ ဒီလိုပုံစံနဲ့ သူ အသက်ဆုံးသွားတာကို သိရှာကြရင် ဘယ်လောက်တောင် ရင်ထုမနာ ဖြစ်ကြမလဲ၊ ဖြေမဆည်နိုင် ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ရင်နင့်စရာပါ။
အခု အချိန်မှာရော အဲဒါတွေ ရပ်သွားပြီလို့ ထင်ကြပါသလား။ လုံးဝ မှားသွား ပါလိမ့်မယ်။ ထောင်ဝတ်စုံ ပြာပြာနဲ့ ရဲဘက်တွေကို ၀န်ဆောင် တပ်ရင်းတွေ ဖွဲ့ပြီး ပေါ်တာ အဖြစ် ခိုင်းစေ နေကြဆဲပါ။ ဒါတင်မက သူတို့ သွားရာ လမ်းက ရွာတွေမှာ တွေ့သမျှ ယောက်ျားတွေကိုလဲ ပေါ်တာအဖြစ် ဆွဲနေကြဆဲပါ။ ခိုင်းနေကြဆဲပါ။
လူတိုင်းဟာ မိမိ အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရေး ဒါမှမဟုတ် အခြေခိုင်နိုင်ရေး အတွက် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားကြ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူစိတ်ရှိတဲ့ လူတိုင်း မိမိကြောင့် တပါးသူ ထိခိုက်နစ်နာမှာ ဘယ်သူမှ မလိုလားကြပါဘူး။ လူစိတ် ကင်းမဲ့တဲ့ လူ့ဗာလ တွေကတော့ ကိုယ့်ကြောင့် ပျက်သုန်းသွားရတဲ့ ဘ၀တွေ၊ အသက်တွေကို ထောက်ထား ညှာတာခြင်း မဲ့စွာနဲ့ သူတို့ တည်မြဲဖို့အတွက် ယုတ်မာ ရက်စက် ကြပါတယ်။ အဲဒီလို လူတွေ ဘယ်လောက်များ သက်ဆိုး ရှည်ကြဦး ကြမှာပါလိမ့်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျနော်တို့တတွေ …….. ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:37 PM4comments
ဒီတပတ်တော့ သူငယ်ချင်း တယောက်အိမ်ကို အလည်သွားရင်း ဘီယာဝိုင်း ဖွဲ့လိုက်တာ လူလဲ အတော်လေးကို ဒေါင်ချာစိုင်း သွားပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ခေါင်းတွေက ကိုက်၊ ရင်ထဲမှာလဲ တလှပ်လှပ်နဲ့ အတော်ကို နေရ ထိုင်ရ ဆိုးတာပါပဲ။ မနက်မိုးလင်း အိပ်ယာထလို့ နာရီကိုကြည့်တော့ မနက် ကိုးနာရီခွဲ နေပါပြီ။ ကွန်ပြူတာရှေ့ ရောက်တော့ ကွန်ပြူတာထဲက အချိန်က ရှစ်နာရီခွဲသာ ရှိပါသေးတယ်။ ငါ အမူး မပြေသေးတာလား မသိလို့ စဉ်းစားမိ ပါသေးတယ်။ အမှန်က ဆောင်းဝင်တော့မှာ မို့လို့ ဒီမှာ စံတော်ချိန်ကို တနာရီ နောက်ပြန်ဆုတ် ထားတာပါ။
သူရာ ယစ်ရွှေရည်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို စာအုပ်ပေါင်း များစွာမှာ စာရေးဆရာပေါင်း များစွာက ရေးခဲ့ပြီးသားပါ။ ရေးတဲ့လူက ဘယ်လောက်ပဲ ရေးနေပေမယ့် ကျနော်တို့လို ငမိုက်သားတွေကတော့ အချိန်ကျလာပြီ ဆိုတာနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့လိုက် သောက်လိုက်၊ မူးလိုက်နဲ့ သူရာမေရိယကံကို တပျော်တပါးကြီး ကျူးလွန်ကြတာပါပဲ။
ကျနော့် ဘ၀မှာ အရက်ကို မှတ်မှတ်ရရ ပထမဆုံး စသောက်ဖူးတာကတော့ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ ညမှာပါ။ စာမေးပွဲ မဖြေနိုင်တာကို အကြောင်းပြပြီး အတန်းဖော် ညီအကို ၀မ်းကွဲ နှစ်ယောက်နဲ့ အတူ သောက်တာပါ။ အိမ်ပြန်တော့ မေမေသိမှာ စိုးလို့ ကွမ်းယာတွေဝါး၊ မာလကာ ရွက်တွေဝါးနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ဖုံးဖိပေမယ့် အကင်းပါးတဲ့ မေမေကတော့ သိတာပါပဲ။
မေမေ အလယ်တန်း ကျောင်းအုပ် ရာထူးနဲ့ တခြားမြို့ကို ပြောင်းရွှေ့သွားလို့ အဒေါ်တွေနဲ့ ကျနော် သွားနေရတဲ့ အခါမှာတော့ ကျနော် တယောက် လုံးဝကြီးကို အရက်လွတ်လပ်ရေး ရတော့တာပါပဲ။ စိတ်ညစ်လို့၊ ပျော်လို့၊ မတွေ့တာကြာတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆုံလို့၊ နှုတ်ဆက်ပွဲ လုပ်လို့ စသဖြင့် စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်ပေါင်း များစွာနဲ့ အရက်ကို အကြိမ်ပေါင်း များစွာ သောက်ခဲ့တော့ တာပါပဲ။ အရက်ကို အနိမ့်ဆုံး တောအရက်နဲ့ လက်ဖက်သုပ် အမြည်းကနေ အဖိုးတန် အရက်များအထိ သောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မူးပြီးရင် ရန်တွေဖြစ်၊ တခါတလေ ကောင်မလေးတွေ အိမ်ရှေ့မှာ မူးမူးနဲ့ သီချင်းတွေ သွားအော်ဆိုနဲ့ ကျနော်ဟာ အတော်ဆိုးတဲ့ အကောင်ပါ။
အရက်ကြောင့် လူအထင်သေးခံရ၊ အပစ်ပယ်ခံရနဲ့ ဒါလဲ မမှတ်ပါဘူး။
ဒီနိုင်ငံရောက်တော့ ကျနော် အရက်မသောက်တော့ပါ။ (အမှန်က ခေါင်းစဉ် ပြောင်းတာပါ)။ ဘီယာပဲ သောက်ပါတယ်။ မီလာလိုက်၊ ကားလ်စ်ဘတ်၊ ဘတ်ဒ်ဝိုက်ဇာ၊ ဆင်းဂါး၊ ဟင်နီကင်၊ ခိုရိုနာ စသဖြင့် စသဖြင့် တံဆိပ်ပေါင်း များစွာနဲ့ ဘီယာပေါင်းများစွာကို သောက်လိုက်တာ ဘယ်တော့မှ အတော သတ်နိုင်တော့မယ် မသိပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော် တခု စဉ်းစားမိပါတယ်။ မကောင်းမှန်းလဲ သိ၊ ငွေကုန်မှန်းလဲ သိရက်နဲ့ ဘာလို့များ ကျနော်တို့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး သောက်နေကြပါလိမ့်။ အဖြေတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သောက်တာကလဲ သောက်နေဆဲပါ…။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆုံးမသူမဲ့ ကျနော် ဘယ်နေ့ကျရင် ဒါတွေကို မသောက်ပဲ နေနိုင်မှာပါလိမ့်လို့ ခေါင်းတွေ ကိုက်နေတဲ့ မနက်မှာ အတွေးတခုတော့ ၀င်မိပါရဲ့ ….။
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:01 PM3comments
လူဆိုတဲ့ လူတွေကြား (ဟေ့.. ဒီမှာ)
ညီညွတ်မှုကသာ အဓိကဗျ.. (ကဲ)
လာလေ အတူတို့ တွဲလက်ကယ် ညီကြစို့
ဆန့်ကျင်သူကိုလဲ မေတ္တာ ထားကြမယ်
ကျင်တွယ်လို ဖြောင့်မတ်တဲ့ (ငါတို့တတွေ)
ကြမ္မာဆိုတာ ငင်ဖို့ဝေး.. မြင်စို့လှည့်လေး.. ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:30 PM2comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:41 PM 1 comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:51 PM3comments
ဒီဗွီဘီ သတင်းဌာနက တင်ဆက်ထားတဲ့ ကိုဇာဂနာတို့ရဲ့ သူတောင်းစားများ ညီလာခံ ဆိုတဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ပြက်လုံးများကို ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.. ဒီနေရာ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:52 PM 1 comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:40 AM4comments
မြန်မာပြည်ကို ငွေလွှဲဖို့ကိစ္စတခုအတွက် တခြားပြည်နယ်က အကိုတယောက်ကို စနည်းနာကြည့်လိုက်တော့မှ ကျနော်တယောက် လောကကြီးနဲ့ အတော်အဆက်ပြတ်နေမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်.. မြန်မာလေးယောက်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သန်းနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးမိပါသတဲ့.. တရားမ၀င်ငွေလွှဲမှု၊ ငွေမည်းမှုများနဲ့ အရေးယူခံရဖွယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ဒီဂယက်ဟာ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတော်တော်များများကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်.. အရင့်အရင်က ငွေလွှဲပေးနေကြ လူများ ဘာကိုမှမလုပ်ရဲတော့တဲ့ အပြင် တချို့ဆို ဖုန်းတောင် မကိုင်ရဲလောက်အောင် ဖြစ်ကြပါတယ်.. အဲဒီအကိုက ယခုနောက်ဆုံး အနေအထားအရ ငွေလွှဲနေကြတဲ့ ပုံစံသစ်ကို ပြောပြအကြံပေးပါတယ်.. အမေရိကန်ကနေ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက မြန်မာမိတ်ဆွေ တယောက်ယောက်ဆီကို ဘဏ်ခြင်း တရားဝင်လွှဲ ဟိုကမှတဆင့် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လွှဲတဲ့နည်းပါ.. အရင်ကတော့ ငွေလွှဲချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ အဲဒီလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့လူဆီကို ချက်လက်မှတ်ရေးပီး စာတိုက်ကနေ ချက်လက်မှတ်နဲ့တကွ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပို့ပေးယုံနဲ့ ကိစ္စအားလုံး နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အတွင်း ပြီးပြတ်နိုင်ပေမယ့် အခု အတိုင်းဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး တပတ်ကနေ ဆယ်ရက်လောက်အထိ အချိန်ကြာမြင့်တော့မှာပါ.. ကျနော်ကတော့ ရဲတွေဖမ်းမိသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်လာငွေ ခြောက်သန်းကို မဆီမဆိုင် အတော်နှမြောမိပါတယ်.. မြန်မာလူမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရှာဖွေထားကြရတဲ့ ငွေများပါလိမ့်.. အင်တာနက်စာမျက်နှာ တခုက အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေ တန်ဖိုးနှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ကြည့်မိတော့ အမေရိကန် တဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ ၁၃၆၀ ကျပ်ပါတဲ့… ဒါကပဲ အဖြေလားမသိ.. စဉ်းစားစရာ……….။
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:32 PM2comments
ပုံမှန်အားဖြင့်.. ကျနော် ကဗျာရေးလေ့ မရှိလှပါဘူး.. ကဗျာကို သေချာ ကျွမ်းကျင်အောင် ရေးနိုင်စွမ်း မရှိတာရယ်နဲ့.. တခြားသောသူများ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ခံစား ရတာကို ပိုနှစ်သက်မိလို့ပါ.. ဒါပေမယ်တကြိမ်မှာတော့ ကျနော် မြန်မာပြည်ထဲက ၀က်ဘ် ဆိုက် တခုရဲ့ အက်ဒမင်ကို လူလည်ကျချင်တာနဲ့ ကဗျာ နှစ်ပုဒ် ရေးလိုက်ပါတယ်.. ဟိုပုဂ္ဂိုလ်များကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ.. ချက်တာတွေကို ဘမ်းပစ်.. ပိတ်ပင်ပစ်တဲ့ အဲဒီ ၀က်ဘ်ဆိုက်က ပုဂ္ဂိုလ်များ.. ကျနော် လူလည်ကျထားတာကို အခုထိ မသိကြ ပါဘူး.. အဲဒီကဗျာလေး နှစ်ပုဒ်ကို မဖတ်ဖြစ်ရသေးသော သူငယ်ချင်းများကို ဝေမျှချင် တာနဲ့ ဒီမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.. ကျနော့် သူငယ်ချင်းများကိုတော့ ဦးနှောက် မစားစေ လိုပါ… ကဗျာစာကြောင်းတွေရဲ့ ပထမဆုံးသော စာလုံးတွေဟာ ကျနော်က ပေးချင်တဲ့ ကဗျာထဲက မက်ဆေ့ပါပဲ…
ပါရမီကံ နည်းလွန်းလှတဲ့ ငါ
စေစားသူ အရှင်သခင်ရဲ့ လက်ထဲမှာ…။
ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ဘ၀လေး တခုရယ်ပါ..။
ရွှေဘုံပေါ်မှာ နေလိုတဲ့ ငါ (ငါဆိုတဲ့ငါက)
စေတလုံး ပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင်သား….။
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:05 PM7comments
ဒီနေ့ အလုပ်ကလဲပိတ် ရာသီဥတုက အေးလာတော့ အပြင်လဲထွက်ချင်စိတ် မရှိတာနဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ တနေကုန်အောင်းပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ပဲ နပန်းလုံးနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ဘလော့လေးတခုကို လုပ်ချင်လွန်းလို့သာ လုပ်လိုက်ရတယ်.. ဘာမှကလဲ မတတ်.. အပြောကျယ်လှတဲ့ network ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ကျနော်ကတော့ ဒီဘလော့ တခုတည်းနဲ့တင် လုံးလည်ချာကို လိုက်နေခဲ့ပါတော့တယ်.. သတင်းတွေနားထောင်… သီချင်းတွေနားထောင်မိတော့.. တချို့သော သတင်းတွေ သီချင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှပေးချင်စိတ်က ပေါ်လာပါတယ်… အဲဒါနဲ့ပဲ.. ဒေါင်းလော့တွေလုပ်.. ဟိုဘက်မှာတင်လိုက်.. ပြန်ဖွင့်လိုက်နဲ့.. အခု ဒီစာကိုရေးနေတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ ညနေ ငါးနာရီထိုးပါပီ.. ကဲ.. ကျနော်ရဲ့ မတတ်တခေါက်နဲ့ လုပ်ထားတာလေးကို ဒီမှာ မှာဝင်ကြည့်ပြီး ခံစားနားဆင် ပေးကြပါဦးဗျာ..
Posted by ကလိုစေးထူး at 5:19 PM2comments
ဒီစကားရပ်ကို ဘယ်သူက ဘယ်အချိန်ကာလလောက်မှာ စပြီးတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့လဲ ဆိုတာ ကျနော်သိချင်မိပါတယ်..တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ကြားရတာ ခါးသီးလွန်းပြီး.. စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှတာကြောင့်ပါ.. အဲဒီ ငါးလုံးတည်းသော စကားရပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာငါက ဘာကောင်ကွ.. မင်းလိုကောင်ကတော့ ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး.. စသဖြင့်..စသဖြင့်သော.. အဓိပ္ပာယ်တွေက မပြောပဲ ပါပြီးသား ဖြစ်လို့နေပါတယ်..ဒါဖြင့်.. ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီစကားရပ်ကို ဘယ်လို လူစားတွေကများ..အသုံးပြု အများဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ.. ????…………။မှတ်မှတ်ရရ.. အဲဒီစကားကို စတင်ကြားဖူးတာကတော့ ဆယ်တန်းကျောင်းသား ဘ၀ကပါ..ညနေခင်းတခုမှာ.. ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်.. ဘောလုံးကစားပြီးလို့အိမ်ကိုအပြန်မှာ.. ကျနော်တို့ ဘေးနားက ဆိုက်ကားတစီး ဖြတ်သွားပါတယ်..အဲဒီဆိုက်ကား နောက်မှာထိုင်နေတဲ့.. မူးယစ်နေတဲ့ အစိမ်းရောင် ၀တ်စုံနဲ့လက်မောင်းမှာ အနီကျား တခုပိုင်ရှင် ပုဂ္ဂိုလ်က ကျနော်တို့ကိုအတော်ချစ်ရှာတယ်ထင်ပါရဲ့.. လှမ်းဆဲပါတယ်.. လူငယ် သဘာဝထောင်းကနဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်နဲ့ နီးရာ အုတ်ခဲကျိုး တခုကို ကောက်ယူပြီး တခုခုတုံ့ပြန်မယ် အလုပ်မှာ.. ဆိုင်ကယ်တစီးက အနားကို ဝေါကနဲလာရပ်ပါတယ်..ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်းလာသူကလဲ အစိမ်းရောင် ၀တ်စုံနဲ့ပါပဲ.. ဒါပေမယ့် သူကတော့အနီကျားမဟုတ်တဲ့ ရွှေရောင် အပွင့်ကလေး နှစ်ပွင့်က ပုခုံးပေါ်မှာအခန့်သားနဲ့ပါ.. ဘာကိုမှ မမေးမြန်းမီ.. အုတ်ခဲကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်ကိုသူပြောတာက မင်းက ဘာကောင်လဲ ….တဲ့။နောက်ပိုင်း…ကျနော် မမှတ်မိတော့တဲ့… ကာလတွေပေါင်း များစွာမှာလဲ..ဒီမကြားချင်ဆုံး စကားစုဟာ.. ခဏခဏ ကြားခဲ့ရပါတယ်..ပြောချင်တာကတော့ ဘာရယ်မှမဟုတ်ပါ… ဘယ်သူမှ ဘာမှမဟုတ်ကြတဲ့ ပုထုဇဉ်လူသားကျနော်တို့တတွေ.. ဘယ်သူက တနေရာတည်းမှာ မြဲမှာမို့လို့ပါလဲ?? ဒါပေမယ့်…….ဒါပေမယ့်…..။ ကျနော်တို့ ၀န်းကျင်မှာ ကျနော် မကြားချင်တဲ့ ဒီစကားကိုလူတဦးက လူတဦးကို ပြောဆိုသုံးနှုန်းနေဆဲပါ.. ပြောနေကြတုန်းပါ…၀မ်းနည်းမိပါရဲ့..။
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:52 PM 1 comments
ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို ကြည့်လိုက်ရင် ဟိုး ကျောက်ခေတ်ကစပြီးတိုက်ခိုက်လာလိုက်ကြတာ ယနေ့တိုင်အောင် စစ်ပွဲတွေက မဆုံးနိုင်ကြသေးပါဘူး.. တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ တိုက်ခိုက်ကြတာလဲ ရှိကြသလို ပြည်တွင်းမှာ အစိုးရနဲ့ သူပုန်ရယ်ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်ကြတာလဲ ရှိကြပါတယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ပွဲတခုဖြစ်လိုက်ပီဆိုတာနဲ့ ကြားထဲကအထိနာလှတာက အရပ်သားပြည်သူတွေပါပဲ.. အချစ်နဲ့စစ်မှာ မတရားတာမရှိဘူးလို့ ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ်သူကများ စတင်တီထွင်သုံးစွဲခဲ့သလဲတော့ ကျနော်မသိပါဘူး.. စစ်ပွဲတခု အနိုင်ရလိုမှုကြောင့်တရားခြင်း မတရားခြင်းတွေ.. ထောက်ထားညှာတာခြင်းတွေ.. အလုံးစုံကင်းမဲ့စွာနဲ့ ရက်စက်မှုကို ကမ်းကုန်ကြပါတယ်.. အဲဒီလိုကမ်းကုန်အောင် ရက်စက်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အပြစ်ကင်းမဲ့လှတဲ့ပြည်သူများဟာ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ဓားစာခံ ဖြစ်ကြရပါတော့တယ်.. Porter ဆိုတဲ့စကားရပ်ဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာ အရပ်သားပြည်သူတွေ မကြားချင်ဆုံးနဲ့ အထိတ်တလန့် အဖြစ်ရဆုံး စကားဖြစ်ပါတယ်.. ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များသို့တည်းမဟုတ် စစ်တပ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ၀န်စည်စလယ်တွေကို ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကို သယ်ယူဖို့ အလို့ငှာ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများမှအစ.. နွမ်းပါးစွာ စီးပွားရှာစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေထိအဆုံးအတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေကြပါတယ်.. အဲဒီလို ခိုင်းစေမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် ကျနော်ဟာလဲ တကြိမ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ ပေါ်တာ အထမ်းသမား ဘ၀ကို ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတော့တယ်..၁၉၉၂ ခုနှစ်ရဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့.. တနည်းအားဖြင့် ကျနော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ (၄၄)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီခုနှစ်ပိုင်းတွေက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ. ကျနော်တို့ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဘာစိတ်ကူးတွေ ပေါက်တယ်မသိပါဘူး.. ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လဲ လှေပွဲသဘင်. မြင်းခင်းပွဲ သဘင်တွေ ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပနဲ့ အဲဒီတုန်းကဆိုရင် ကျနော့်စိတ်ထင် ကျနော်တို့တွေ နားမှာ နားကပ်ကြီးတွေပန်.. တောင်ရှည်ပုဆိုးကြီးတွေနဲ့ နေရတော့မှာလားလို့တောင် ထင်မှတ်ခဲ့မိပါတယ်. လှေပွဲတွေကို ရန်ကုန်မှာ လုပ်ယုံတင်မပြီးပါဘူး..အိမ်ရှေ့ပူ အိမ်နောက်မချမ်းသာ ဆိုသလို ကျနော်တို့ နေထိုင်ရာနယ်မြို့ကလေးတွေကိုလဲ ဒီရောဂါကူးစက်မှုက မလုပ်မနေရအမိန့်နဲ့ ရောက်လာပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ မြို့မှာ
လှေပြိုင်ပွဲ လုပ်နေခဲ့ပါတယ်.. လှေပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးပြီးလို့
ဆုပေးပွဲလုပ်တော့မယ့် အချိန်မှာ မြစ်အကွေ့ကနေ အမင်္ဂလာမြင်ကွင်းတခုက အားလုံးရဲ့ အမြင်အာရုံထဲကို ဘွားကနဲရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်. အဲဒါကတော့ စစ်သားတွေအပြည့် တင်ဆောင်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော သုံးစင်းပါ..ကျနော်ရဲ့ မွေးရပ်မြေမြို့ကလေးမှာ ယောက်ျားလေး တယောက်ဟာလူပျိုပေါက်အရွယ် ရောက်လာပီ ဆိုတာနဲ့ ရှေးရှေးတုန်းက မင်းညီမင်းသားတွေတတ်အပ်တဲ့ အဌာရသ (၁၈)ရပ်လိုမျိုး တင်စားချင်တဲ့ အတတ် တခု ရှိပါတယ်.အဲဒါကတော့ စစ်သားတွေပေါ်တာ လိုက်ဖမ်းခြင်းမှ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လွတ်အောင် ပြေးရမလဲဆိုတဲ့ အတတ်ဖြစ်ပါတယ်.. ညဘက်တွေမှာ အပျိုလေးတွေ အိမ်ကိုလူပျိုလှည့်သွားရင်ဖြစ်စေ.. ညနက်တဲ့အထိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင်ဖြစ်စေ..ဗီဒီယိုရုံမှာ အပန်းသွားဖြေရင်ဖြစ်စေ.. မျက်စေ့နဲ့ နားကို သတိနဲ့ ရှင်ရှင် ထားရပါတယ်. အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အမှောင်ရိပ်ထဲက ဘွားကနဲပေါ်လာတတ်တဲ့ မိစ္ဆာတစုစုရဲ့ ခနလိုက်ခဲ့စမ်းပါ ဆိုတဲ့ စကားရပ်နဲ့အတူအနိဌာရုံမြင်ကွင်းတွေ ရှိရာကို လေးလံလှတဲ့ ၀န်စည်တွေကိုထမ်းပိုးပြီး သွားရမှာမို့လို့ပါ.. အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပဲ.. စောစောကမြင်လိုက်ရတဲ့စစ်သင်္ဘော သုံးစင်းဟာ အဲဒီလှေပြိုင်ပွဲက ကျနော်အပါအ၀င် ယောက်ျားဘသားတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေကို တပ်လှန့်လိုက်ပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဟာလဲ ခါတိုင်း သူတို့ ပေါ်တာ လိုက်ဖမ်းနေရင် တက်ပုန်းနေကြ အိမ်နားကမန်ကျည်းပင်ကြီးပေါ်ကို သွားရောက် စံစားခဲ့ပါတော့တယ်..လူဖမ်းပွဲကြီးအနည်းငယ် စဲသွားပီလို့ ထင်ရတဲ့ ညနေစောင်းလောက်မှာ ကျနော်ဟာ အိမ်ကို ပြန်ပါတယ်.. အဲဒီမှာ မေ့မေ့ကို မျက်နှာမရွှင်မလန်းနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်.. မေမေ ဘာဖြစ်နေလဲ မေးတော့ ခေါင်းကို အသာခါပြပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခနအကြာမှာ မေမေနဲ့ တကျောင်းတည်းမှာ ကျောင်းဆရာလုပ်နေတဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ ရောက်လာတော့မှအကြောင်းစုံသိလိုက်ရပါတော့တယ်.အဖြစ်က ဒီလိုပါ.. အဲဒီ စစ်သင်္ဘောသုံးစင်းက စစ်သားတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးညီအကို သူတို့နဲ့ မတည့်တဲ့ လူတွေကို သွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထမ်းပို့ပေးဖို့အတွက် အထမ်းသမားပေါ်တာသုံးရာလောက်လိုပါသတဲ့.. လိုက်ဖမ်းတော့ တရာတောင် ပြည့်အောင်မရဖြစ်ပါသတဲ့..အဲဒီလိုနဲ့ပဲ မြို့ပေါ်က ဌာနဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေကို အစည်းအဝေးဆင့်ခေါ်ပီး မီးသတ်ဌာနက လူသုံးဆယ်. ကျန်းမာရေးက နှစ်ဆယ်..
ပညာရေးက ဆယ်ယောက် .. တခါအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနခေါ် မ၀တရုံးက ဘယ်လောက်.. တခြားသော ဌာနတွေလဲ ဘယ်လောက်ဘယ်မျှ ဆိုပြီး ခွဲတမ်းချပါသတဲ့.. ရွှေဉာဏ်တော်စူးရောက်ချက်ကတော့ အံ့သြချီးကျူးလောက်စရာပါပဲ.. အဲဒီလိုနဲ့ပဲ မေမေတို့ပညာရေးဌာနမှာ မဲနှိုက်ဆုံးဖြတ်ကြတော့ မေမေနဲ့ ဦးလေးက မဲပေါက်လာပါတယ်.. မလိုက်နိုင်ရင် ငွေငါးထောင်ပေး ငှားရပါမယ်.. (အဲဒီတုန်းကလက်ဖက်ရည်တခွက်မှ ငါးကျပ်ပဲရှိပါသေးတယ်).. အဲဒါကြောင့် မေမေဟာ
မျက်နှာ မသာမယာဖြစ်နေရတာပါ..အကြောင်းစုံသိလိုက်ရပီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကျနော်ဟာ မေမေ့ကို ဘာမှမပြောပဲအဲဒီတုန်းက ကျနော့်ရဲ့ တထည်တည်းသော ဂျင်းပင်ကို ၀တ်.. ဦးလေး လုပ်လာသလိုမျိုး ပုဆိုးတထည်ကို စလွယ်သိုင်း အ၀တ်တစုံအပို ရေဘူး တလုံးနဲ့ပေါ်တာလိုက်သွားဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်.. မေမေကတော့ ဘာမှမပြောနိုင်ပဲအဝေးတနေရာကိုသာ မျက်ရည်အပြည့်နဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုက်ပြီး ကြည့်နေပါတယ်..ကျနော်က မေမေ့ကို ကန်တော့ပီး မေမေ သားလိုက်သွားမယ်..လို့ ပြောရင်း ကန်တော့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မေမေဟာ ခြုံးပွဲချ ငိုပါတော့တယ်. ဒါပေမယ့်ရွေးစရာလမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး…ပညာရေးဌာနအနေနဲ့ ခွဲတမ်းကျတဲ့ဆယ်ယောက်လူစုရာ ကျနော် ပညာသင်နေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကို ဦးလေးနဲ့အတူ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျောင်းမှာ ဆရာမကြီးက အငိုမျက်နှာနဲ့ စောင့်နေပါတယ်.. ပြီးတော့ ကျနော်တို့ သွားရမယ့်ခရီးစဉ်ကို ရှင်းပြပါတယ်.. လေးရက်ကြာမယ်လို့ ပြောကြောင်း..အဲဒီလေးရက်အတွက် အခု လိုက်သွားရမယ့်လူတွေမနစ်နာအောင်ပညာရေးဝန်ထမ်းအားလုံးကို လစာ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်ပီး တဦးကို ၂၅၀၀စီပေးမယ့်အကြောင်း.. တကယ်လို့ လေးရက်ထက်ပိုခဲ့ရင် တရက်အတွက်ငါးရာနှုန်းနဲ့ ရှင်းပေးမယ့် အကြောင်း.. လောလောဆည် တယောက်ငါးရာစီပေးလိုက်မယ့် အကြောင်းကို တုန်ယင်နေတဲ့ အသံနဲ့ ရှင်းပြပီးသူကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ ၀က်သားဟင်းနဲ့ ကျနော်တို့ကို ထမင်းကျွေးပါတယ်.. အဲဒီတုန်းက ငွေငါးရာဆိုတာ ကျနော်တခါမှ မကိုင်ဖူးတဲ့ ငွေအတိုင်းအတာပါ..ကျနော့်လက်ထဲ ငွေလှမ်းပေးတဲ့ဆရာမကြီးကို အဲဒီ ပိုက်ဆံ မေမေ့ကို ပေးပေးပါဆရာမကြီးလို့ ပြောလိုက်တော့ ဆရာမကြီးလဲ ငိုပါတော့တယ်..ကျနော်တို့ စစ်တပ်ထဲကို ရောက်သွားတော့ ညမှောင်ခါစပြုနေပါပီ.. အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ ထမ်းဖို့အတွက် ကျည်ဆန် တထောင်စီဆန့်တဲ့သစ်သားပုံးငယ်လေးတွေကို ၀ါးလုံးနဲ့ လျှိုပြီး ရှေ့နောက် နှစ်ယောက်ထမ်းလို့ရအောင် အဆင်သင့် စီထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်.. ကျနော်နဲ့ ဦးလေးက တတွဲတွဲပီးထမ်းပါတယ်.. အဲဒီညက လေးမိုင်လောက်ပဲ သူတို့ သွားပါတယ်.. ရွာတရွာအရောက်မှာ ညအိပ်ရပ်နားကြပါတယ်.. လူတွေက တရုန်းရုန်း..စစ်သားတွေနဲ့ ဆဲသံ တညံညံနဲ့..အေးချမ်းတဲ့ရွာလေးမှာ.. တကယ်ကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်..မနက်မိုးလင်းတော့ ကျနော့် ပုခုံးမှာ ဘုထနေပါတယ်.. တခါမှအဲဒီလို မထမ်းဖူးတာကြောင့်ပါ.. ဦးလေးလဲ ဒီလိုပါပဲ.. အဲဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ကိုစောင့်ကြပ်ရတဲ့ အနည်းငယ် စိတ်ကောင်းရှိဟန်တူတဲ့ စစ်သားက ကျည်ဆန်အစားတဦးကို ဆန်ဆယ်ပြည် ထမ်းစေပါတယ်.. ဆန်အိတ်ကို ရေရှည် သယ်ပိုးနိုင်အောင်သူကပဲ သင်ပေးပါတယ်.. ဒါလဲ ပညာတမျိုးပါပဲ.. ဆန်ထည့်ထားတဲ့ ဂုန်နီအိတ်ကို ဆန်တွေကို တင်းကျပ်အောင် ကပ်ပီး ကြိုးမစည်းပဲ.. အိတ်ရဲ့ အ၀နားမှာစည်းပါတယ်.. အဲဒီတော့ ဂုန်နီအိတ်ဟာ ခပ်ပြားပြားပုံစံဖြစ်နေပါတယ်..အဲဒီခပ်ပြားပြားပုံစံအိတ်ကို ကျောပေါ်တင်.. ကြိုးစည်းထားတဲ့ အထုံးနေရာကိုခေါင်းပေါ်မှေးတင်ပီး သယ်တော့ ပလိုင်းလွယ်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်.. သွားရတာကြာလို့ ကျောက ညောင်းရင် ခေါင်းကို တည့်လိုက်.. ခေါင်းက ညောင်းရင်ကျောကိုကုန်းလိုက်နဲ့.. အနည်းငယ်သက်သာပါတယ်..လမ်းမှာ ပင်ပန်းချက်ကိုတော့ စာမဖွဲ့နိုင်အောင်ပါပဲ.. အဲဒီအလုပ်နဲ့အသက်မွေးရတဲ့လူလဲမဟုတ်တာကြောင့် အလေ့အကျင့်ကလဲမရှိ.. ကြောက်စိတ်က တဖက်နဲ့ဆိုတော့.. အဲဒီခရီးဟာ ကျနော့်အတွက်တော့ တကယ့်ကို စွန့်စားခန်းပါ..မိုင်းကိုလဲ ကြောက်တော့ ဘေးဘီ ဘယ်ကိုမှမကြည့်ပဲ ရှေ့ကလူ နင်းသွားတဲ့ခြေရာအတိုင်း ကျနော် ထပ်ခြပ်မကွာ လိုက်နင်းပါတယ်..အဲဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင် သေနတ်သံဟာ ကျနော့်အတွက် အချိုဆုံးအသံပါ..တမျိုးတော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့.. သေနတ်သံကြားလို့ရှိရင်လူတန်းကြီးက ရပ်ထားရတဲ့အတွက် အကြာကြီး နားရလို့ပါ.. ဒီလိုနဲ့ပဲအဆဲခံရင်း.. အိမ်မှာ ကျနော့်ကို စိတ်ပူနေတဲ့ ကျနော့်မေမေကို သူတို့ရဲ့ပါးစပ်ဖျားက မယားအဖြစ် ပေးရင်းနဲ့ပဲ.. လေးရက်အကြာမှာ သူတို့သွားချင်တဲ့ ရွာကြီးတရွာကို ရောက်သွားပါတယ်..အဲဒီရွာမှာ.. သူတို့တပ်အချင်းချင်းဆုံပီးပြန်မယ့် တပ်နဲ့..ရှေ့တန်းမှာ မိုက်လုံးကြီးကြမယ့်တပ်တွေ အလဲအလှယ်လုပ်ကြပါတယ်.. ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီရွာဟာလဲကမ္ဘာပျက်ရရှာပါတယ်..အပြန်ခရီးမှာ ကျနော်ထမ်းဖို့ တာဝန်ကျတာက ဒဏ်ရာရနေတဲ့ မိစ္ဆာကောင်ကို ထမ်းရတာပါ.. လူနာ တထမ်းကို လေးယောက်နှုန်း စကေးချပေးပါတယ်.အလဲအလှယ်နဲ့ပေါ့.. အဲဒီမှာလဲ.. လူနာထမ်းနည်း ပညာတခု ရပါတယ်..လူနာအထမ်းတခုစီမှာ ခွထောက်ပုံစံ အရှည်လေးပေကျော်ခန့်သစ်ကိုင်းခပ်တုတ်တုတ် နှစ်ချောင်းစီ ပါရပါတယ်.. နှစ်ယောက်က ထမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ တခြား နှစ်ယောက်က အဲဒီ သစ်ကိုင်းတုတ် တချောင်းစီကိုကိုင်ပီး ဘေးကနေလိုက်ပေးရပါတယ်… အကြောင်း တခုခုကြောင့် သွားနေတဲ့လူတန်းကြီးက ရပ်သွားရင် အဲဒီခွထောက်တွေကို ရှေ့နောက် ထောက်ပေးပီးထိန်းကိုင်စောင့်ခြင်းအားဖြင့် အမောဖြေရပါတယ်.. အဲဒီ လူနာ အထမ်းတာဝန်ကျတဲ့လူတွေဟာ မိုင်းအန္တရာယ်လဲ အတော်ကြီးပါတယ်…သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေ ဘေးကိုခနခနထွက်ထွက်သွားတော့ ရှေ့လူသွားတဲ့ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နင်းလို့မရလို့ပါ…ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့..အဲဒီခရီးမှာ ကျနော်ဟာ ခြောက်ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်… မြို့ကိုပြန်ရောက်လို့ အဲဒီစစ်တပ်ထဲကနေ ထွက်လာတော့ လူကယိုင်တိယိုင်ထိုးနဲ့ပါ.. စစ်တပ်အ၀မှာ သားကြီးလုိ့အကျယ်ကြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တာက မေမေပါ.. ချွေးတွေနဲ့ နံစော်နေတဲ့ ကျနော့်ကိုမေမေဟာ အားပါးတရဖက်ပီး ငိုပါတယ်..ကျနော်တို့ ကမ္ဘာမှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြဆဲပါ… အဲဒီစစ်ပွဲတိုင်းမှာလူတိုင်းမသိနိုင်ကြတဲ့ ကျနော်တို့လို ကြားခံ ဓားစားခံတွေဘယ်လောက်ရှိနေသေးပါသလဲ?? ကျနော်မသိပါ.. အခုအချိန်မှာရောဒါတွေပြီးဆုံးသွားပီလို့ ကျနော်မထင်ပါ.. ထောင်ဝတ်စုံပြာပြာနဲ့ ထောင်သားတွေကို ပေါ်တာအထမ်းသမားအဖြစ် အသုံးချနေတာကို ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတွေ့နေရဆဲပါ… ဒီလို လူကို လူက နှိပ်စက်နေတာတွေ.. သတ်ဖြတ်နေတာတွေ..ရပ်ကြပါစေတော့လို့ ဆုတောင်းရင်း…….။